Ciidamada Faransiiska Oo lagu Weeraray Dalka Maali. – Calamada.com
Ciidamada Faransiiska Oo lagu Weeraray Dalka Maali.
calamada April 8, 2017 1 min read
Wararka ka imaanaya dalka Maali ayaa sheegaya in saacadihii lasoo dhaafay weerar culus uu ka dhacay qeybo ka mid ah dalkaasi oo duulaan ay ku joogaan ciidamada dowlada Nasaarada Faransiiska.
Weerarkan oo si gaar ah loola beegsaday ciidamada Faransiiska waxa uu ka dhacay deegaanka Hombara oo ah deegaan dhaca dhanka Konfur Bari dalka Maali gaar ahaan xadbeenaadka u dhaxeeya dalalka Maali iyo Burkina Faso.
Warbaahinada caalamka ayaa qoray in weerarkaasi oo ay fuliyeen ciidamada Mujaahidiinta Jamaacada Nusratul Islam Wal Muslimiin oo ah jaamaco taabacsan Mujaahidiinta Al-qaacidah ee dhulka Magribul Islam Dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen tiro ka tirsan ciidamadaÂ Nasaarada Faransiiska.
War rasmi ah oo kasoo baxay xafiiska madaxweynaha dowlada Faransiiska gaalka lagu magacaabo Francois Hollande ayaa lagu xaqiijiyay in weerarka ka dhacay dalka Maali lagu dilay askar Faransiis ah balse wararka qaar ee laga helayo dalka Maali ayaa sheegaya in khasaaraha uu intaasi ka badan yahay.
Ciidamada Dowlada Nasaarada Faransiiska ayaa afar sano ka hor duulaan ku tagay dalka Maali si ay ula dagaalamaan Mujaahidiinta Al-qaacidah ee dhulka Magribul Islam’waxeyna si joogta ah weeraro culus kala kulmaan dhanka Mujaahidiinta.
Previous: Askari Lagu Dilay Degmada Mahadaay Ee Gobalka Shabeelada Dhexe.
Next: Halkan Ka Dhageyso Warka Duhurnimo 11-07-1438 Hijri.